အရက်အလွန်အကျွံသောက်ရင် အသည်းကိုဘယ်လိုထိခိုက်စေသလဲ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » အသည်းရောဂါ » အရက်အလွန်အကျွံသောက်ရင် အသည်းကိုဘယ်လိုထိခိုက်စေသလဲ
ရေးသားသူ Dr.Thant Zin ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ hellosayarwon.
အရက်ကို တခါတရံလောက်ပဲ သောက်ရာကနေ ရေရှည်စွဲသွားတာမျိုး၊ မသောက်ရမနေနိုင် ဖြစ်သွားတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရက်သောက်ခြင်းဟာ သေချာစဉ်းစားရမယ့် ကိစ္စမျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။ အရက်ကို ရေရှည် အလွန်အကျွံ သောက်ရင် လူမှုရေးပြသနာများသာမကပဲ ကျန်းမာရေးလည်း ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသည်းရောဂါများ ဖြစ်ပါတယ်။
အရက်ကို ကိုယ်ခန္ဓာက ဘယ်လိုစုပ်ယူသလဲ
အရက်သောက်ချိန်မှာ အရက်ကို အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှတဆင့် သွေးကြောတွေထဲကို စုပ်ယူလိုက်ပါတယ်။ အစာလမ်းကြောင်းကလာတဲ့ အရက်များဟာ နှလုံးဆီမရောက်ခင် အသည်းကို ဖြတ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်းမှာ အရက်ပမာဏ အများဆုံးစုဝေးပါတယ်။ အသည်းရဲ့ဆဲလ်တွေမှာ အရက်ကို အင်ဇိုင်းစနစ်ရဲ့ ဓာတုဖြစ်စဉ်အဆင့်များစွာနဲ့ ပြောင်းလဲအပြီးမှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ ရေအဖြစ် ထွက်လာစေပါတယ်။ ပြီးရင် ဆီးထဲနဲ့ အဆုတ်ထဲ ရောက်သွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသည်းမှာလည်း အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ နာရီတိုင်းမှာ အတိုင်းအတာတခုအထိပဲ ချေဖျက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သုတေသနတွေအရ တနေ့ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယူနစ် ၁ ယူနစ်ကနေ ၂ယူနစ်ထိပဲ ထောက်ခံထားပါတယ်။ ၁ ယူနစ်မှာ ၂၅မီလီလီတာ အရက် ၄၀ဒီဂရီ ဒါမှမဟုတ် ၅၀မီလီလီတာ ၂၀ဒီဂရီ ပါဝင်ပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း အရက်စွဲသူများ၊ အလွန်အကျွံ သောက်သူများမှာ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေဖြစ်တဲ့ အသည်းအဆီဖုံးခြင်း၊ အသည်းရောင်ခြင်း၊ အသည်းခြောက်ခြင်း စတဲ့ အရက်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ အသည်းရောဂါတွေပေါ်လာပြီး ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဆိုးရွားလာပါတယ်။
အသည်းအဆီဖုံးခြင်းဆိုတာ အသည်းဆဲလ်တွေမှာ အဆီများစုဝေးလာခြင်းဖြစ်ပြီး အရက်အလွန်သောက်သူတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရက်သောက်ခြင်းကို ရပ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီးသောက်နေရင်တော့ အသည်းရောင်တဲ့အဆင့် ရောက်သွားပါတယ်။ အရက်ကြောင့် အသည်းရောင်ခြင်းဟာ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေကနေ ဆိုးရွားတဲ့ အခြေအနေထိ ရှိပါတယ်။
သိပ်မပြင်းထန်သေးချိန်မှာ လက္ခဏာမပြတတ်ဘဲ သွေးစစ်မှသာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အင်ဇိုင်းတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့မှာတော့ ရောဂါကြာသါားပြီး အသည်းဆဲလ်တွေ တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးသွားတဲ့အခါ အသည်းခြောက်ခြင်းအထိ ဖြစ်စေပါတယ်။ ပိုဆိုးတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ အသည်းအောင့်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် အသည်းရောင်တဲ့အခါ အသည်းရောင်ခြင်းမှတဆင့် ကိုမာသတိမေ့ခြင်း၊ အသားဝါခြင်း၊ သွေးမခဲခြင်း၊ သိမြင်မှုအားနည်းခြင်း၊ သတိမေ့ခြင်း၊ အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုခြင်း စတာတွေဖြစ်ပြီး သေဆုံးမှုလည်း မြင့်မားပါတယ်။
ဒီရောဂါဖြစ်ရင် အာဟာ၇ဓာတ်မျှတအောင် စားရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အစာပြွန်ထည့်ပေးခြင်း၊ စတီးရွိုက်ပေးခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်ရပါတယ်။
အသည်းခြောက်ခြင်းဆိုတာ အသည်းမှာ ဖိုင်ဘာတစ်သျှူးများ ပြောင်းလဲသွားပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ပိုမိုဆိုးရွားသွားတတ်တဲ့သဘော၇ှိပြီး ဖိုင်ဘာတစ်သျှူးတွေဟာ အသည်းဆဲလ်တွေရဲ့ ပုံမှန်တည်ဆောက်ပုံနဲ့ အသစ်ပြန်ဖြစ်ခြင်းအပေါ် ထိခိုက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။အသည်းဆဲလ်တွေဟာ ထိခိုက်သေဆုံးသွားပြီး တစ်သျှူးတွေဟာ အစားထိုးလာပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အသည်းဟာ ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေ မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဖိုင်ဘာတစ်သျှူးတွေဟာ အသည်းဆီ ပုံမှန်သွေးစီးဆင်းမှုကို အနှောင့်အယှက် ပေးလာပါတယ်။
အမာရွတ်တစ်သျှူးများပေါ်လာပြီး အရင်လိုပြန်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ပထမပိုင်းမှာ အသည်းဆဲလ်တွေဆုံးရှုံးခြင်းဟာ လူကို မထိခိုက်စေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အသည်းဆဲလ်တွေ ပိုမိုပျက်စီးလာတာနဲ့အမျှ ဖိုင်ဘာတစ်သျှူးတွေ များသထက် များလာပါတယ်။ အသည်းရောင်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တူတဲ့အပြင် နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသည်းခြောက်လာပါတယ်။ အချိန်ကြာကြာ အသည်းခြောက်နေသူများနဲ့ အသည်း သွေးပြန်ကြောပိတ်သူများမှာ ရေဖျဉ်းစွဲခြင်းပါ ဖြစ်လာပါတယ်။အသည်းခြောက်ခြင်းရဲ့ အဆိုးအရွားဆုံး အခြေအနေကတော့ အသည်းကင်ဆာကို ဦးတည်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းခြောက်ခြင်းဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ၊၊ မျိုးရိုးဗီဇရောဂါများ၊ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုပြသနာများ စတာတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြင့်ဆုံးကတော့ အရက်ကို ၁၀နှစ်အထက် သောက်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး ၁၀%ခန့်ရှိပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာတွေအပြင် တခြား စစ်ဆေးနည်းတွေကလည်း ရောဂါရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ALT နဲ့ ALP မြင့်တက်ခြင်း၊ အယ်လ်ဗျူမင်နည်းခြင်း၊ သွေးတွင်းဘီလီရူဘင် ပါဝင်မှုများခြင်း စတာတွေကို သိနိုင်ဖို့ သွေးစစ်ခြင်း၊ အသည်းပျက်စီးမှုကို သိနိုင်တဲ့ အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း၊ အသည်းဆဲလ်များကို နမူနာစယူ စစ်ဆေးခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရက်ဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးရင် အစားအသောက် အာဟာရမျှတအောင်စားဖို့၊ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ် ဖြည့်စွက်စာတွေ ခဏတာစားသုံးဖို့ လိုပါတယ်။
ရေဖျဉ်းရှိတဲ့ လူနာတွေမှာ ဆီးဆေးနဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေ ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အသည်းဟာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် တခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ အသည်းအစားထိုးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင် အရက်မသောက်ပါနဲ့။ အရက်ကိုဖြတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် လျှော့ပါ။ အကန့်အသတ်နဲ့လုပ်ပါ။ အမျိုးသားတွေမှာ တနေ့ကို ၄ယူနစ်နဲ့ တပတ်ကို ၂၁ယူနစ်ထက် ပိုမသောက်ပါနဲ့။ အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် တနေ့ကို ၃ယူနစ်၊ တပတ်ကို ၁၄ယူနစ်ထက် ပိုမသောက်ပါနဲ့။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေမှာ လုံးဝမသောက်ပါနဲ့။ သောက်နေသေးတယ်ဆိုရင်လည်း တပတ်ကို ၁-၂ယူနစ်အောက်ပဲ သောက်ပြီး မမူးပါစေနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတျ 17, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတျ 17, 2018
HealthUnlocked, NHS Choices, Alcohol-related liver disease, http://www.nhs.uk/Conditions/Liver_disease_(alcoholic)/Pages/Introduction.aspx. Accessed on April 5, 2017
AmericanLiverFoundation, Alcohol-Related Liver Disease, http://www.liverfoundation.org/abouttheliver/info/alcohol/. Accessed on April 5, 2017
ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း လှူတဲ့ မိသားစုဆီ ကျေးဇူးတင်စာရေးနည်း
ကလေး အသည်းအစားထိုးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိဘတွေဘာသိသင့်သလဲ
အသည်းအစားထိုးကုသမှုအကြောင်း ကလေးကို ဘယ်လိုပြောမလဲ